मार्क रुट र थियरी Baudet को बीच बहस को प्रमाण छ कि तपाईंले वोट नहीं गर्नु पर्छ: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	23 मई 2019 मा	•6टिप्पणिहरु
यो एम्स्टर्डम मा रेड टोट मा जेरोन पऊव द्वारा समन्वय गरिएको कार्य (मार्क रूट र थियरी बेउडेट को बीच बहस पनि भनिन्छ) मा, मेरो राय मा, हामी ठूलो अभिनेता संग काम गर्दै एक महान प्रमाण थियो। आफ्नो आँखा बन्द गर्ने शीर्ष अभिनेताहरू। बहसमा हामीले दुई राम्रो प्रशिक्षित च्याट निर्माताहरू देख्यौं जसले दुवैलाई जीवित प्रमाण दिईयो कि तपाईले मतदान गर्ने कुरा गर्नुहुन्न, तर तपाई केवल जहाज ए देखि जहाजमा उडान गर्न सक्नुहुनेछ, त्यहि बेटमा सधैं त्यहि दिशामा रहन्छ। FvD जहाज VVD जहाज भन्दा पूर्ण तरिकाले नयाँ पाठ्यक्रम पाल्न चाहन्छ जस्तो लाग्छ, तर यो केवल भ्रम हो कि थिरीरी बाउडेटले तपाईंलाई आफ्नो शुद्ध नेटमा ल्याउन सिर्जना गर्न सक्छ; सुरक्षा नेट जसले मैले पहिले नै यहाँ साइटमा छलफल गरेको छु।
मापदण्ड गर्न जान्नुपर्दछ र धेरै वर्षको लागि नेदरल्यान्डमा अवधारणाको ठूलो अवधारणा रहेको छ जुन पूर्ण रूपमा डच सरकारको नीतिको साथ सहमत छ। ठूला डेटा विश्लेषणले यो सजिलै पारदर्शी बनाउन सक्छ र कुनै पनि कुरा रेडियो, टिभि र समाचार पत्रहरूमा प्रचार प्रसार धारणा-आधारित रिपोर्ट मार्फत तपाइँले कसरी राम्रो काम गर्नुहुन्छ। त्यो समूह साँच्चै सानो हुदैन। यसकारण तपाईले सधैँ सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईसँग त्यो समुहको लागि एक शब्दावली छ। पिम फोर्टुएनको हत्याले वास्तवमै मद्दत पुर्याएन र ग्रिर्ट वाइल्डर्सको सुरूवात र उनको पार्टीको कडा कथानक जस्तै "कम मोरक्कोन्स" लाई पनि वास्तवमा मद्दत गर्दैन। यो पनि एक घटना हो कि युरोप व्यापक भूमिका ले रहेको छ।
मार्क रोल्टको सहयोगमा कलियियर बाउडेटले कल प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएको थियो, कसरी सुरक्षा रणनीतिले कार्य गर्दछ र कसरी दुबै पुरुषहरू एउटै बेट मास्टरको झण्डामा चोरी गर्छन्। यसैले दुवैलाई वास्तविक र निश्चितको लागि मतदान गर्न छलफलको अन्त्यमा कल गर्नुहोस्। त्यस्तो बहस उच्च गुणस्तर अभिनय भन्दा बढी छैन। तपाईं लगभग यो कुश्ती म्याचहरूमा तुलना गर्न सक्नुहुन्छ जुन हामी अमेरिकन टिभीबाट जान्दछौँ, जहाँ अभिनेताहरूले वास्तवमा उनीहरूलाई कुन हिसाबले थाहा पाउँछन् र कुन लाभ र हानि पोइन्टहरू गर्न सकिन्छ। यसले कार्यान्वयन गरिरहेको छ जसमा लाभ र हानि पोइन्टहरू अग्रिममा सहमत हुन्छन्; यद्यपि यस छलफलले अचानक र भयंकर देखिन्छ र ठूलो प्रवाह बनाइन्छ।
ती व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूले वर्ष पछि सरकारहरू द्वारा झगडा गरिरहेका छन्, किन उनीहरूले पार्टीको लागि मतदान गर्छन्, युरोपभरि बढ्दै गएको छ। त्यसोभए यदि तपाईं चीजहरू सँगसँगै राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले त्यो समूहलाई पक्र्याउनु पर्छ। म यहाँ सुरक्षा नेट रणनीति भन्छु। त्यसैले तपाईंलाई बोर्डको कप्तान संग एक जहाज चाहिन्छ जुन तीरको लागी हालको माछा चढाउने योजनाको लागि चारा फ्याँकिएको छ। यदि यो राजनीतिक नेता (अभिनेता) जसले यस समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ त्यति धेरै सहयोग पुर्याउँछ, तपाइँ यहाँ केही मध्यवर्ती बमहरू सक्रिय पार्छन् र त्यहाँ समूहलाई कमजोर पार्छ। तथापि, तथापि, यो रणनीति अब युरोप भरमा रहेको छ (र पनि अमेरिकी): तपाइँ पहिला त्यो समूह धेरै बढ्दै हुनुहुन्छ, यसलाई राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद, आलोचकहरूसँग घृणा गर्नुहोस् (विषको साथ साजिश सोच) र दायाँ। त्यसोभए तपाईंले ती राजनीतिक आचरणहरू लाभ उठाउन अनुमति दिनुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरू जनताबाट धेरै ध्यान दिन्छन्। त्यसपछि तपाई तिनीहरूलाई अन्ततः आर्थिक र सामाजिक असफलताको लागि जिम्मेवार बनाउनुहुन्छ र 1x मा तपाईले समाजको आलोचनाको साथ ठूलो मात्रामा सम्झौता गर्नुहुन्छ र तपाईलाई समझाउन सक्नुहुनेछ कि केवल 1 सही पथ र यो वैश्वीकरण र शक्तिको केन्द्रीकरणको हो।
यसैले हामी सबैलाई देख्छौं कि ती राजनैतिक नेताहरूले स्टिगससँग जोडिएका छन्। ती स्ट्रिज जानबूझै (मीडिया बयानहरूमार्फत) र अन्तिम रात हामीले देखेका थियौँ कि मार्क रोल्टले थियरी Baudet मा यी स्ट्याम्पहरू कसरी राख्ने अनुमति पाए। वास्तवमा, यी स्ट्याम्पहरू तपाईँलाई चित्रित छन्, मतदाता। यो सही इरादा हो। तपाई ब्रान्डमा वर्गीकृत गरिनेछ। तपाइँ हाइलाइट गरिनेछ। तपाईंको विचारहरू पूर्वनिर्धारित ब्रान्डमा मिडिया मार्फत र सम्पादित राजनीतिक प्रवृत्तहरूमार्फत जोडिएको छ। यो ब्रान्ड सही, अनौपचारिक महिलाहरु, विरोधी-ईयू (वा राष्ट्रवादी), देशभर (बाहिरी सीमा), विरोधी-इस्लाम, आफ्नै देश, आफ्नै मुद्रा र आफ्नै व्यापारिक हित पहिला, साजिश सिद्धान्तहरूमा जलवायु चाप विश्वासीहरू र विश्वासीहरू (जस्तै इतिहास को झूठाकरण को क्षेत्र)। यो ब्रेक्सिट, नेपिट, फ्रेक्सटाइट (आदिटेरा) समूह हो जुन सबै युरोपमा समर्थन लिन सक्छ।
गट भावनाहरु ठूलो समूह संग रहछन र चाँडै यसैले यस ब्रान्ड संग जोडिएको भावना संग एक ठूलो मात्रा मा निपटनु पर्छ। यदि तपाईं सबैलाई एक र एकै नै ब्रान्डमा लिङ्क गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईले पहिलो समूहलाई बढ्न अनुमति दिनुहुन्छ, तपाइँ अन्तर्गत निर्मित बमहरू सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ र जहाज डुब्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाइँ सुरक्षा नेट भाँडाहरूको सम्पूर्ण बेडालाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ (जुन युरोप र अमेरिकामा एउटै ब्रान्ड प्राप्त गरिएको छ)।
तपाईं यहाँ र त्यहाँ केहि स्क्यानलहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ, ताकि नयाँ ब्रान्डको अंतरिम संदूषण पहिले नै हुन्छ। यी सबै प्रकारका राजनैतिक दलको बहस हुन सक्छ, तर सबै राजनीतिक प्रशासनिक तर्कहरू, अपरिहार्यताको अस्तित्व, आदि भन्दा माथि हुन सक्छ। अन्ततः, तथापि, इरादा समूह (नयाँ ब्रान्ड) प्रमुख आर्थिक र सामाजिक विफलताको लागी जिम्मेवार बनाउनु हो। ब्रेक्सिटले यो उद्देश्य कार्य गर्दछ। यो पनि कारण ईयू छोड्न अघि ब्रेक्सिट रेफ्रिन्डम को लागी जीत को अनुमति दिइएको थियो। यही कारण हो कि थेरेसा मई, सबै ब्रिटिश राजनीतिज्ञहरू (अभिनेताहरू) सँग संयोजनमा हुनसक्छ, र ब्रेक्साइट प्रक्रिया असफल हुनसक्छ। तथ्याङ्कहरूमा र सबै प्रकारको दुबै प्रभावहरूमा ब्रेक्साइटले दायाँ-प्वाइङ्ग समूह (नयाँ ब्रान्ड जुन सबै प्रकारका विचारहरूसँग जोडिएको हुन सक्छ) मा एक अन्धो स्थान घुम्नु पर्छ। सुरक्षा नेट जहाज (नयाँ ब्रान्डको सम्पूर्ण सुरक्षा नेट बेइजिट) ठुलो हुनुपर्दछ ताकि डूबिंग मान्छे पुरानो बेडामा उडाउन सकिन्छ। पुरानो बेडाले तपाईंलाई वैशाखिकरण र पावरको केन्द्रीकरण तिर सावित पार्छ।
राजनीतिक अभिनेताहरूलाई बेवास्ता गर्ने एउटा मात्र तरिका चुनावमा हिंड्ने र यसको आधारमा प्रणालीलाई कमजोर बनाउनु हो। थियरी Baudet केवल सुरक्षा नेट रणनीतिकर्ता हो जसले ध्वनि (ब्रान्ड) को प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन ठूलो आवधिक अपील गर्दछ। यो भावना हो कि मान्छे जान्दछ जिउँदो छ, तर के गर्नु पर्छ कि चिन्ह लगाउनु पर्छ, ताकि त्यस ब्रान्ड पछि सबै समस्याहरु को दोषी ठहरिनेछ र ब्रान्ड दाहिने तिर ठुलो हुन सक्छ र डूबिंग व्यक्तिहरु लाई पुरानो विश्वसनीय बेडा को जहाज मा फिर्ता जान सकिन्छ। बन्नुहोस्। तिनीहरू हास्यास्पद हुनेछन् र तिनीहरूले यसलाई आफ्नो मनबाट फेरि कहिल्यै आलोचना गर्नेछन्।
यदि तपाइँ साँच्चै परिवर्तन गर्न केहि चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ निश्चित रूपमा राजनीतिमा आफ्नो आत्मविश्वास दिनैपर्छ। यो परिवर्तन अभिनेताहरूको लागि मतदान जारी राखेन (शाब्दिक अभिनेता) जसले तपाईंलाई समात्न पाउँदछ। यो परिवर्तन आउँछ जब तपाईं आफ्नो कार्य तल राख्नुहुन्छ, अब अब चुनावमा जान्छ र मिडिया र राजनीतिको धारणा प्रबन्धकहरूलाई तिनीहरूको गढ़बाट बाहिर निकाल्नुहोस्। तपाईंले माथिको परिवर्तनको अपेक्षा गर्नुपर्दैन, किनभने तिनीहरू सुरक्षाको कारण हो र अर्को सुरक्षा नेट रणनीतिकर्ताको लागि मतदानले फेरि परिवर्तन ल्याउँदैन। यो केवल सुरक्षा नेट जहाज सिंक हुनेछ। तपाईंले एक्शन आफैं लिनु पर्छ। यो कट्टरपिक परिवर्तन र एक क्रांति जस्तै समय हो यहाँ वर्णित.
तपाईले कम्तिमा गर्न सक्नु हुन्छ यस लेखलाई सम्भव छ! त्यसपछि तपाईंले निश्चित रूपमा एक सुरुवात गर्नुभयो।
स्रोत लिङ्क सूची: npostrart.nl
काजिसा ओल्लेन्ग्रेन द्वारा थियरिरी बाउडसेट र नस्लवाद कार्ड क्लाइन्न्डेलियल हाउस द्वारा सुरु भयो
योद्धा र एक सैनिक बीचको भिन्नता
ट्याग: एम्स्टर्डम, debat, EU, युरोपियन, विशेष, FvD, टोपी, जेरोन, मार्क, प्याक, रातो, रूट, मतदान गर्नुहोस्, थियरी Baudet, tv, चुनाव, चुनावको बहस, भिडियो, VVD
23 मई 2019 मा 09: 47
द्रुत प्रतिक्रिया र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ... राम्रो टुक्रा
23 मई 2019 मा 10: 04
तपाईं सही हुनुहुन्छ यी मध्ये नै यी दुई बचत गर्न जाँदैछ।
रूट मात्र भन्छ कि हामी डच बैंकको कारण ईयू छोड्न सक्दैनौँ। यहाँ समाधान छ यदि तपाईं सँग एक सरकार छ कि मान्छे को बारे मा ख्याल राख्छ भने, तपाईं बैंकहरू माथि र तिनीहरूलाई हटाउनु। ग्रीसमा गएर पैसा ग्रीक जनतालाई डच र जर्मन बैंकहरू बचाउन सकेन। यसले कुरा नगर्ने कि मान्छे घृणा गर्छन र आत्महत्या गर्न वा साधारण रोगहरु बाट मर्छ। त्यो एबीएन अम्रोरोले एक वर्षमा दुई अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ जबकि यो राज्यको स्वामित्वमा रहेको छलफल पनि छैन। यो बैंक धेरै थोरै बेचेको थियो, जब डच जनसंख्याले एक अर्ब दुई अरब रुपैयाँ कमाएको थियो।
जबसम्म हाम्रा नामक नेताहरूले वित्तीय प्रणाली रिसेट गर्दैनन् र दास चेन वा ऋणलाई निषेधित गरेन, तिनीहरू त्यहाँ प्रणालीको लागि छन्।
पश्चिमका प्रायः बैंकहरूले तपाईंलाई हावा हावा लगाएको बैंकको लागि कम्तीमा3दिन काम गर्दछ। नतिजा, सबै पैसा तिर्न बाँकी रकम बाँकी छैन र आमाले पनि काम गर्न पाउनु पर्छ। छोराछोरीलाई बुबाको सरकारमा राम्रो लाग्दछ। कडा परिश्रम गरिएका आमाबाबु र आमा आमाको हेरविचार अवस्थामा पर्छन्।
त्यहाँ एक मात्र समाधान हो र यो मतदान रोक्न र भुक्तान गर्न हो।
कोही पनि दृश्यमा देखा पर्छन्, तिनीहरूसँग सबै दास चेन्जमा राख्ने काम छ।
23 मई 2019 मा 10: 12
अनि निस्सन्देह यो: "यदि तपाईंले मतदान गर्नुभएन भने, तपाईं ह्वाइट गर्न सक्नुहुन्न!"
यो वरिपरि अर्को तरिका हो: यदि तपाईले तपाईंलाई मतदान गर्न अनुमति दिनुहुन्न भने, किनकि तपाईले गलत र लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिकतालाई धोका दिने र धोका दिने गर्दछन्। केही झूटा प्रणाली (एक शान लोकतान्त्रिक छ कि केवल लोकतान्त्रिक छ कि प्रजातन्त्रलाई आत्मनिर्भर रूपमा चल्नु पर्दछ) भन्ने हो भने सबैलाई हड्डीमा तोड्नु पर्छ। यसकारण तपाईंले यसलाई वैधता दिन नदिनु र सम्पूर्ण तंत्रलाई कमजोर पार्नु हुँदैन।
23 मई 2019 मा 10: 37
मलाई जहाजको उदाहरण मनपर्छ।
जहाजमा केही व्यक्तिहरूले उनीहरूको अन्तिम गन्तव्यको रूपमा एक देश भ्रमण गर्नेछन् भनेर थाह छ
जहाँ सबै व्यक्तिले बोर्डमा दासको रुपमा काम गर्नु पर्छ र त्यसो भए सबैले कोनेको टापुलाई दास टापुमा मतदान गरे।
के तपाई अझै पनि चुनावको पूर्वसद् भन्दा पहिले थाहा छ?
यो रूटले नरक र स्वर्गको बीचमा छान्ने बेलामा एक प्रचार टुक्रा पनि पाउँछ, पढ्न, यो मजाक होइन, यो कडा सत्य हो।
23 मई 2019 मा 22: 13
हां, अवश्य अचानक PVDA जीत ... हाहाहा कसरी सम्भव छ?
27 मई 2019 मा 09: 29
"दाहिने" बेडाको डिसिङ सुरु भएको छ:
मतदानको हानि, 'ठूलो शहरहरूको किनारमा' ('किनारा घटनाको लागि उपनाम'), यहाँ हेर्नुहोस्:
« मिडिया एक घोटाला दिनुहोस्, एक राज्य सचिव (हर्बर्स) बलिदान: विश्वसनीयता मार्केटिंग
विल्सन Boldewijn (भिडियो) संग Telegraaf.nl मा मार्टिन व्रिजल्याण्ड संग लाइव साक्षात्कार »
कुल भ्रमण: 13.743.656
SalmonInClick op पहिलो चरण लेबलिंग हो, दोस्रो चरण बहिष्कार हो: खोप बटन
सनशाइन op पहिलो चरण लेबलिंग हो, दोस्रो चरण बहिष्कार हो: खोप बटन
मार्टिन भिजल्याण्ड op पहिलो चरण लेबलिंग हो, दोस्रो चरण बहिष्कार हो: खोप बटन